मधुमेहबाट यसरी बचौँ डा.अधिकारी (भिडियोसहित) – Saurahaonline.com
मधुमेहबाट यसरी बचौँ डा.अधिकारी (भिडियोसहित)
चितवन, २८ कात्तिक । मानिसको रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी भई रगतजांच गराउदा चिनीको मात्रा चाहिने भन्दा बढी देखा पर्नुलाई मधुमेह रोग भनिन्छ । यो रोग सरुवा रोग होइन तर मानिसको आफनै खानपान र रहनसहनको कारणबाट देखापर्दछ । कुनै–कुनै प्रकारको मधुमेह वंशानुगत पनि हुन्छ । मधुमेह लागेको शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामाजांच गराई उपचार गराउनु पर्दछ । मधुमेहबाट बच्न नियमित व्यायाम,सन्तुलितआहार आदिमा ध्यान दिनुपर्दछ । यसै सन्र्दभमा चितवनमा मंगलबार मधुमेह दिवसको अवसरमा विविध अलि फरक खालको कार्यक्रम गरिदै छ ।
यसैविच भरतपुर अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन तथा पुष्पाञ्जली अस्पताल प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका डा. भोजराज अधिकारी उच्च रक्त, मुधुमेह, मृगौला र थाईराईडका विरामीहरु बढी मात्रामा हेर्न गर्दछन् । उनै डा. अधिकारीसगँ विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा बारेमा गरिएको कुराकानीका सारसंक्षेप यो अंकमा समावेश गरेका छौँ ।
उनका अनुसार विश्वमा ४० बर्षमाथिका ४ जना मानिसमध्ये एक जनालाई मधुमेह भइरहेको छ ।
मधुमेह बढ्दै जादा आँखा, मृगौला, दिमाग, मुटु, नशालगायत शरीरका विभिन्न अंगहरुमा पनि थप समस्या बढ्दै जान्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार दैनिकरुपमा ३० मिनेट व्यायम गर्नाले मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना ४० प्रतिशतसम्म घट्नसक्छ । यो रोगबारे जनचेतना जगाउन सन् १९९१ देखि नै मधुमेह दिवस मनाउन थालिएपनि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००७ देखि आधिकारिकरुपमा विश्वभरमा नै यो १४ नोभेम्बरलाई विश्वभर मधुमेह दिवसकोरुपमा मनाउन थालेको हो ।
पहिलो किसिमको मधुमेह
शरीरमा इन्सुलिनको उत्पादन अत्यन्त कमहुंदा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा सामान्यभन्दा बढी हुने अवस्थालाई पहिलो किसिमको मधुमेह भनिन्छ । यस्ता बिरामीलाई बाँच्नको लागि नै इन्सुलिन चाहिने भएकाले यिनीहरु जिवनभर इन्सुलिनमा आश्रित हुन्छन् । जुनसुकै उमेरमा देखापर्न सक्ने भएतापनि यस्तो मुधमेह विशेष गरी बाल्यावस्था वा किशोरावस्थामा शुरु हुने र दुब्लापातला मानिसमा बढी देखिने गर्दछ ।
दोस्रो किसिमको मधुमेह
शरीरमा चाहिने जति इन्सुलिन उत्पादन नहु“दा वा उत्पादित इन्सुलिन प्रभावकारी नहुदा वा उत्पादित इन्सुलिनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी देखिएको अवस्थालाई दोसा्रे किसिमको मधुमेह भनिन्छ । यसको उपचारमा सन्तुलित खानपान र नियमित व्यायामको साथसाथै आवश्यकता अनुसार खाने औषधि र कहिलेकाही इन्सुलिनको पनि आवश्यकता पर्न सक्दछ । यस्तो मधुमेह सामान्यतया ४० बषको उमेरपछि प्रायःमोटाघाटा व्यक्तिहरुमा देखापरेको पाइन्छ ।
मधुमेह रोगका लक्षणहरु :
उपरोक्त लक्षणहरु देखापरेमा बेलैमाजाच गराई उपचार प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दछ । रगतमाचिनी धेरै बढी वा धेरै कमहुदापनिमानिस बेहोस हुनक्छ ।
१.शारीरीक रुपमा सक्रिय रहने । जस्तै ः हरेक दिनकम्तिमा ३० मिनेट जतिहल्कापसिनाआउने गरी हिड्ने वा योगागर्ने वाकुनै न कुनै रुपमा शरीर सक्रियहुने त्रियाकलापगर्ने ।
४.चुरोट, बिडी, सूर्ति, तमाखु, खैनी, जर्दा आदि सूर्तिजन्य पदार्थहरुको सेवन नगर्ने ।
मधुमेहलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने
१.कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना जस्तै : भात, आलु कमखाने ।
१०.धेरै रेसादारयुक्त गहुं मकै । कादो, फपर जस्ता खाना चिनी रोगीहरुले खानु राम्रो हुन्छ । धानबाट तयार हुने भात, चिउरा आदिको सट्टा गहु, मकै जस्ता अन्य खानाहरुमा कार्बोहाइडेटको मात्रा तुलनात्मक रुपमा कम हुने हुदा त्यसतर्पm ध्यान पु¥याउनु उचित हुन्छ । साथै दाल,साथसब्जी,फलफूलखानु बढी लाभदायक हन्छ । भातखानै नहुने त होइन परन्तु कोदा,मकै आदिबाट निर्मित खानेकुरा ढिडो, रोटीतर्फ ध्यान दिदा शरीरमा कार्बोहाइडेटको मात्रा केही कमभई रगतमा चिनीको मात्रा कमहुन सक्छ ।
यि खानाहरु खानु हुदैन वा कमखाने
२.चुरोट, बिडी,सुर्ति, तमाखु, खैनी, जर्दा आदि सुर्तिजन्य पदार्थहरुको सेवन नगर्ने ।
१.रगतमा सुगरको नियमित जाँचगर्ने ।
३.रक्तचापको नियमित जाचगर्ने ।
६.वर्षको कमसेकम एकपल्ट पिसाबमा एल्बुमिनएल्बुमिन छैन भने पिसाबमा माइक्रोएल्बुमिनको जाचगर्ने ।